Lammiin Oromoo kun South Afrikaa ummata biyyaatiin bakka suuqii hujjataa ture keessatti ajjeefame – Welcome to bilisummaa
Lammiin Oromoo kun South Afrikaa ummata biyyaatiin bakka suuqii hujjataa ture keessatti ajjeefame
bilisummaa October 30, 2013	1 Comment
AS WR WB ODUU GADDISIISAA !!!!
Yakka sagaggaalummaa raawwate himata jedhuu ka dharaatiin qabamee dhagaa fi uleen akkaata nama suukaneessutti ajjeefame. Achirraa reeffa fuudhaanii akka namoota biraatiif jiila tahu gochuuf magaalaa naannawa sanii ta Skundaa jedhamtu geessanii kararratti darban. Maqaan isaa Muhammad-Amaan Sulxaan jedhama. Baale, Agaarfaa ganda Sheek-Irboo jedhamutti dhalate. Ee gara South Afrikaa dhufee waggaa 3 ykn 4 hin caalu jedhama. Seenaa isaa bal’innaan itti deebina. Breaking news: Saturday 27/10/2013 One of the Oromo refugee member in South Africa was killed in broad day light by gangs. the people oppressed at home are still facing oppression , the discrimination against Oromo refugees and fear of their lives still have no solution, this applies to Oromos refugees in Kenya, Egypt, Djabouti, Somaliland, Somalia, Sudan, South Africa and other African Countries.we look for more voice against this oppression that this cannot happen to any Oromos anywhere. Once an Oromo refugee deported from Kenya and killed in Ethiopian prison by Ethiopian Government, the story of Mr. Tesfahun Camada will remain in all Oromos mind. ————————————-—————————————————————-
Baqataa Oromoo kan tahe ilmi oromoo tokko dhagaadhan reebamee south africa keessatti lubbuu isaa dhabee jira. Suuraafi vidiyoo kanaallee yeroo ammaa ummata gurraacha biyyattii irraa argamee jira. Kuni jibbiinsa ummata baqataa tahaniif ka qabaniifi, xenephobia irratti kan hundaa’edha. Innis sababa ilmoo waggaa 6 rape godhe sababa jedhuun tumamee ajjeefame. Rape kunis soba irratti kan hundaa’efi sababa mallaqa oromticha sodaachisanii irraa nyaatufi. Inni mallaqa kennuu dinnaan polisicha bribe kennaniifii case itti banan. Booda haadha ilma sanii birrii dhibba (R700) erga kennameefii booda poolisichi bribe fedhe sunis akka mallaqni isaaf kennamu barbaade. Yeroo kana dhooggannaan “I will show you what’s going to happen” jedhee biraa deeme. Guyyaa 2 booda abbaa daa’ima sanii wajjiin waltahuudhan, lakkoofsa gabatee isaanii cufatanii mini-bus guutanii mucaa bakka dalagaa isaatii fuudhanii…iddoo dhaabbata taxitti nama maraan tumamuudhan ajjeefamee jira. Polisii ganda saniitti oggaa report godhan “don’t worry they will bring him just now” jechuudhan reebuu didee jira. Nama biraatis magaalaa biraatii haada electricitin hudhamee ajjeefamee jira. Iyyaa iyya nuu dabarsaa meediyalee mararrattuu. Vidiyoos feete isiniifan erga ammaaf suuraa attach godheen jira galatoomaa. —————————————————————————————————— Caaya Tokkummaa Baqattoota Oromoo biyyaa Masrii Miseensotaa isaatif, Baqattootaa Oromoo kan biroollee kan Biyyaa Masrii jiraatan akk uf eeganno cimaa qabaatan isan yaadachiifnaa, Jiruun Biyyaa Ormaa hedduu rakkoodhaa ammaas namaa yaachiftii. Injifannoon Tan Ummata Oromooti. Oromiyaan Ni Bilisoomtii !!! —
Previous Adverse Selection and Moral Hazard: The Likely Causes for the Crises in the Oromo National Liberation Camp
Next Foreigner killed by Mpumalanga mob